त्रिशला ट्रयाक - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
त्रिशलाको स्वभाव सामान्य छ । हल्काफुल्का पहिरनमा रमाउने त्रिशला फुर्सदमा गीत सुन्न रुचाउँछिन् । त्यसबाहेक बाँकी समय आफैं लिरिक्स लेख्छिन् । सबै किसिमका गीत उनको रोजाइमा पर्छन् । उनी लता मंगेसकरका पुराना हिन्दी गीत मन पराउँछिन् । अंग्रेजी गीत पनि सुन्छिन् । रक, पप सबै प्रकारका गीत सुन्ने त्रिशलालाई सबैभन्दा मन पर्ने गीत भने सेन्टिमेन्टल नै हुन् ।
मधुर स्वर, क्युट लुक्स अनि मेडिकल स्टुडेन्ट । यिनै तीन विशेषताकै संयोजनले गायिका त्रिशला गुरुङको बेग्लै छवि छ । धरान, घोपा क्याम्प, शान्तिपथमा लाहुरे परिवारमा जन्मिएकी २६ वर्षीया यी सुन्दर गायिकाको बाल्यकाल धरानमै बित्यो । उनका बुवा भाइकाजी गुरुङ ब्रिटिस लाहुरे थिए, पछि ब्रुनाईमा पनि काम गरे । आमा प्रतिमालाई भने केटाकेटी हुर्काउन र घर सम्हाल्नै ठिक्क ।
जतिबेला त्रिशला हुर्कंदै थिइन्, बालबालिकाहरूका लागि त्यतिबेलाको धरानको अवस्था त्यति राम्रो थिएन । युवा जमात दुर्व्यसनलगायतका समस्याहरूसँग जुधिरहेको थियो । यही कारण, त्रिशलालाई उनकी आमाले भजनतिर प्रोत्साहित गरिन् । आमाको निगरानी भएकाले त्रिशलाको बाल्यकाल कडा अनुशासनका बीच बित्यो । उनले बाल्यकालको अधिकांश समय घरमै बिताइन् । त्रिशलाका दाजु उनीभन्दा १० वर्ष जेठा थिए, उनको पढाइ विदेशमै भएको थियो । त्रिशलालाई पनि खर्स्याङतिर पढ्न पठाउने परिवारको योजना थियो । त्यो योजना पूरा हुन नसकेपछि उनको प्रारम्भिक पढाइ धरानमै भयो ।
त्रिशला सानैदेखि दाजु भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन् । त्यसको कारण थियो—उनीभित्रको संगीत अनुराग । ‘मलाई म्युजिक एकदमै मन पर्ने, दादा म्युजिकमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो,’ आफ्नो बाल्यावस्थाका सम्बन्धमा गुरुङले भनिन््, ‘दादाको कोठामा पुग्थें, दादा आएपछि नयाँ–नयाँ गीत सुन्न पाइन्छ भन्ने कौतूहलता हमेसा रहन्थ्यो ।’ सानैदेखि म्युजिकप्रति उनको प्रेम थियो । ‘तर सिंगर हुन्छु भनेर कहिल्यै सोचिनँ, यद्यपि म्युजिकप्रति बाल्यकालदेखि नै अनौठो एट्याचमेन्ट थियो,’ उनी आफ्नो बाल्यकालका स्मृति पोख्छिन् । हरेक बालबालिकाजस्तै उनका आँखामा पनि त्यो बेलामा सीएनएन र बीबीसीका स्क्रिनमा देखिने सुन्दर युवतीहरूको हाउभाउ र कन्फिडेन्टले राज गर्थ्यो । त्रिशला सोच्थिन्, म पनि सीएनएन–बीबीसीको एंकर बन्छु । उनको अर्को रहर थियो— मिस नेपाल र मिस वर्ल्डजस्ता प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर
उपाधि जित्ने ।
कालान्तरमा त्रिशलाले जे सोचिन्, त्यो बनिनन् । जो सोचिनन्, भाग्यले उनलाई त्यही बाटोमा हिडाउँदै गएको छ । परिणाम नै मान्नुपर्छ, कहिल्यै गायिका बन्छु भनेर कल्पना नगरेकी गुरुङ अहिले युवा पुस्ताकी स्टार गायिका बन्ने बाटोमा छन् । उनको मन्त्रमुग्ध स्वरले आफ्नो प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ, उनको सुन्दरताका कैयौं फ्यान छन् । कभर सङबाट गायन थालेकी क्रिशलाको माग अहिले देश–विदेशका सांगीतिक कार्यत्रमहरूमा समेत हुन थालेको छ ।
झन्डै डेढ–दुई वर्षअघि त्रिशलाले होटल अन्नपूर्णमा आफ्नो पहिलो स्टेज प्रस्तुति दिएको पनि हिजैजस्तो लाग्छ । ‘न्यू इयरका बेला होटल अन्नपूर्णमा पहिलो प्रस्तुति थियो, कति धेरै मान्छे थिए, म कस्तो नर्भस भएँ,’ उनले पहिलो स्टेज सो सम्झिइन्, ‘सबै जना मलाई देखेर एक्साइटेड थिए । म निकै खुसी भएँ ।’ तर, यो छोटै समयमा उनले काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बुटवल, धरान आदिका रेस्टुराँ तथा स्टेजहरूमा प्रस्तुति दिइसकेकी छिन् भने बेलायत, दुबई अनि अस्ट्रेलियाका कार्यक्रम भ्याइसकेकी छिन् । अहिले उनलाई सुन्न चाहनेहरू बढेपछि देशभिक्र र बाहिरका कार्यत्रमबाट थुप्रै प्रस्ताव आइरहेका छन् । यद्यपि एमबीबीएस पढाइ नसकिएकाले उनले धेरै प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिरहेकी छैनन् । ‘प्रस्ताव आएअनुसार नै काम गर्न सकेको भए, पैसा पनि धेरै कमाउँथे होला,’ त्रिशला भन्छिन्, ‘तर, पढाइ पहिलो प्राथमिकता छ ।’ उनी स्वदेश–विदेश जता भए पनि प्रतिस्टेज शो १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनका प्रशंसकहरू दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । फेसबुकमा उनलाई झन्डै १ लाख ३० हजारले पछ्याएका छन् भने इन्स्टाग्राममा २ लाख ६ हजारभन्दा बढी फलोअर्स छन् । केही म्यागजिनका कभरमा समेत छाइसकेकी यी सुन्दर गायिका आफ्ना सोसल एकाउन्टमार्फत चलचित्र तथा विज्ञापनमा पनि काम गरिरहेकी हुन्छिन् । ‘त्यसबाट पनि राम्रै आम्दानी भैरहेको छ,’ त्रिशला भन्छिन्, ‘अहिले सोसल मिडियाका फाइदै फाइदा छन् ।’
सन् २०१६ मा खोलिएको उनको युट्युबलाई झन्डै १ लाख १० हजारले सब्सक्राइब गरेका छन् । सामाजिक सन्जाल तथा युट्युबमा उनलाई पछ्याउनेहरू, उनलाई सुन्ने श्रोता तथा हेर्ने दर्शकहरूको भीड बढिरहेको छ । उनको युट्युब च्यानल मोन्टाइज भएको १ वर्ष पूरा भैसकेको छ । ‘केही पैसा पनि जम्मा भएको छ,’ त्रिशला भन्छिन् । अहिले प्रोफेसनल्ली भिडियो अपलोड गर्न थालेकी त्रिशलाको आधिकारिक युट्युबमा १२ वटा भिडियो छन् जसमा सबैभन्दा हिट भिडियाले झन्डै ५० लाख भ्युज भएको छ । साधना सरगमले गाएको ‘दक्षिणा’ चलचित्रको गीत ‘सपना भई’मा उनको कभर धेरैले मन पराएका छन् । त्यसबाहेक उनले कभर गाएका अन्य नेपाली, हिन्दी तथा अंग्रेजी गीतले पनि युट्युबमा टन्नै भ्युज पाएका छन् ।
त्रिशलालाई चलचित्रका गीत गाउने अफर पनि उत्तिकै आइरहेको छ । उनले चलचित्र ‘सयकडा १०’ को ‘पिरतीको गाउँ’ र ‘दाइलाई कुरा लाइदिने’ मार्फत पार्श्व गायनमा पनि डेब्यु गरेकी छिन् । ‘म अलि सेलेक्टिभ भएकी छु, अहिले कमर्सियल गीत धेरै नै आइरहेका छन्,’ गुरुङले कारण खुलाइन्, ‘पछि बुढेसकालमा राम्रो गाना गाएर हिट भएको हुँ भन्न चाहन्छु, त्यसैले हतार गरेकी छैन ।’ हालसम्म उनले ‘यो मन’, ‘सरस्वती बन्दना’ र ‘काठमाडौं सहर’ गरी तीनवटा ओरिजिनल गीतमा स्वर दिएकी छिन् । ‘काठमाडौं सहर अलि वेस्टर्न टाइपको छ, मानिसहरूमा भिज्न समय लागिरहेको छ,’ उनी कारण खुलाउँछिन् ।
अहिले उनी एल्बमको तयारी गरिरहेकी छिन्, जसमा ८ वटा गीत हुनेछन् । एल्बममा मिक्स टाइपमा गीतहरू हुने त्रिशला बताउँछिन् । उनी लिरिक्स पनि आफैं लेख्छिन् । आफ्नो एल्बमका लागि सबै गीत उनले आफैंले लेखिकी छिन् । फुर्सदमा लिरिक्स लेख्छिन्, लेखिसकेपछि आफ्ना प्रोड्युसर रोहित शाक्यलाई देखाउँछिन् अनि दुई जना मिलेर गीत फाइनल गर्छन् । अर्को वर्ष उनी भगवान् श्रीकृष्णको भजन एल्बम पनि निकाल्ने योजनामा छिन् ।
गुरुङले दीपक बजाचार्य, नरेन लिम्बू, स्वप्न सुमन, नितेषजंग कुँवर, सुशान्त, योद्धा, रोहितजंग क्षेक्री आदि गायकसँग संयुत्त प्रस्तुति दिइसकेकी छिन् । स्वप्न, नितेष र त्रिशला आर्बिटरीमा सँगै पनि थिए । अहिले आर्बिटरीबाट नितेष र त्रिशला अलग्गिसकेका छन् भने स्वप्न अझै आर्बिटरीसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म उनले न संगीत सिकेकी छिन्, न त कुनै रियाज नै गर्छिन् । उनी आफैं भने गायनमा एकदमै रुचि राख्छिन् । त्यही रुचिले नै उनलाई स्टार गायिका बनाउने बाटोमा हिँडाउँदैछ । ‘भगवान्कै कृपाले म गायनमा आएकी हुँ,’ त्रिशला भन्छिन् । जे भए पनि तीन वर्षको छोटो अवधिमै युवा स्टारका रूपमा उनको उदय लोभलाग्दो छ । तीन वर्षमा पाएको यो सफलताको सूत्र के हो त ? ‘आई थिंक, हेर्नमा पनि राम्री देखिन्छु होला, गायन पनि राम्रै छ कि, अर्को मेडिकल स्टुडेन्ट पनि भएकाले सुनमा सुगन्ध भयो कि ?’ त्रिशला प्रश्नसूचक भावले हेर्छिन्, ‘युवा फिमेल आर्टिस्टहरू पनि थिएनन्, फ्रेस फेस भएर पनि म मन पराइएँ कि ?’ यी डाक्टर गायिकाले भविष्यमा फरक धारका दुई अलग पेसालाई कसरी अघि बढाउने सोचेकी छिन् त ? त्रिशला भन्छिन्, ‘एनजीओ खोलेर मेन्टल हेल्थ अवारनेसमा काम गर्न मन छ । संगीतको करिअरलाई सँगै अघि बढाउने योजनामा छु । सर्जन वा अरू फुलटाइम डाक्टर हुने योजना छैन, सर्जन हुँदा दुवै काम अगाडि बढाउन सम्भव छैन । त्यसैले म दुवैलाई अघि लान सम्भव हुने गरी अघि बढ्छु ।’
सोसल मिडियाबाट गायिका
सोसल मिडिया नयाँ पुस्ताका लागि एक्स्पोजर दिने गतिलो माध्यम हो । स्वप्न सुमन, नितेषजंग कुँवरहरूजस्तै त्रिशला पनि सोसल मिडिया हुँदै गायनमा आएकी हुन् । ‘फेसबुक, युट्युब र इन्स्टाग्राम नभएको भए, म गायिका नै हुँदिनथेँ,’ त्रिशला भन्छिन्, ‘सोसल मिडिया नभएको भए, गीत निकालेर रेडियो, टिभीमा दिनुपर्थ्यो, त्यहाँसम्म मेरो पहुँच नै थिएन ।’
हुन त त्रिशला स्कुल पढ्दादेखि नै गीत–संगीतमा रुचि राख्थिन् । स्कुलमै रहँदा उनले केही एवार्ड समेत जितिसकेकी थिइन्, तर त्रिशलाको गायिका बन्ने यात्राको रोचक कहानी भने झन्डै तीन वर्षअघि सुरु हुन्छ । सुन्दा मीठो लाग्ने एउटा कथाजस्तै । नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा एमबीबीएस पढ्दा उनी होस्टलमा बस्थिन् । त्यहाँ उनी गीत गुनगुनाइरहन्थिन् । उनको गायनका श्रोता थिए, होस्टलमेटहरू । तिनै साथीहरू त्रिशलाको स्वरको प्रशंसा गर्दै भन्थे, ‘कति राम्रो गाउँछेस् !’ त्रिशला आफूलाई मन परेका गीतहरू गाउँथिन्, मोबाइलमा क्लिप बनाउँथिन् र बिनासम्पादन इन्टाग्राममा अपलोड गर्थिन् ।
एक दिन उनले ‘लग जा गले’ हिन्दी गीत गाइन्, मोबाइलमा भिडियो रेकर्ड गरेर इन्स्टाग्राममा हालिन् । सम्पादनबिना मोबाइलमार्फत तयार पारिएको क्लिप हिट भयो । उनका प्रशंसक नसोचेको हिसाबमा बढ्न थाले । ‘यो एमबीबीएस तेस्रो वर्ष पढ्दाताकाको कुरा हो,’ गुरुङ सम्झन्छिन्, ‘हुन त त्यसअघि पनि केही गीत हालेकी थिएँ, तर एकदमै भाइरल बनाउने गीतचाहिँ त्यही भयो । यति धेरै भ्यू आयो जसको मैले कल्पनै गरेकी थिइनँ ।’ त्यसपछि उनका भिडियो उनका फ्यानका युट्युब च्यानलहरूमा देखिन थाले । फ्यानहरू ह्वारह्वार्ती बढ्न थालेपछि उनी थप उत्साहित भइन् । उनले मोबाइलले रेकर्ड गर्दै घरमै गाएर भिडियो हाल्न थालिन् । सोसल मिडियामा क्रिशलाको गायनको जादु चल्न थाल्यो ।
यो त्रम चलिरहेकै थियो, उनलाई मिति ठ्याक्कै याद छैन । उनी अत्तरखेल मै छँदाको कुरा हो । बेलायतबाट एक कम्पिटिसन आयोजना गरिएको थियो, ३ सय पाउन्ड पुरस्कार । त्यसमा पिपुल्स च्वाइसमा थप ५० पाउण्ड पुरस्कार । त्रिशलाले ‘पानी मीठो हजुर...’ गीत गाएर पठाइन् । १९७४ एडीका फिरोजले त पत्याएनन् नै, उनले भनेछन्, ‘यो गीत त उनले गाउनै सक्दिनन्, लिप्सिङ गरेको होला ।’ पछि सबै गीत हेरेपछि बल्ल उनले पत्याए । ती दुवै एवार्डमा त्रिशलाले बाजी मारिन् ।
त्रिशलाले कभर सङलाई निरन्तरता दिइरहिन् । नेपाली, अंग्रेजी तथा हिन्दी कभर सङ गाउने क्रममा चलचित्र बर्फीको ‘फिर ले आया दिल’ गाइन् । त्यसलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा अपलोड गरिन् । भोलिपल्ट फेसबुक अपलोड गीतको मुन्तिर एउटा कमेन्ट थियो— ‘कति मीठो आवाज, सुनिरहूँ लाग्ने ।’ उक्त कमेन्ट चर्चित गायिका मलिना सोताङको थियो । ‘मलिना सोताङ र उदय सोताङको म बच्चैदेखि एकदमै ठूलो फ्यान,’ त्रिशला त्यो कमेन्ट पाउँदाको आश्चर्यमिश्रित भाव प्रकट गर्छिन्, ‘उहाँले नै कमेन्ट गर्नुभएको हो भनेर मैले त विलिभ नै गरिनँ ।’ उनले कैयौं पटक त्यो कमेन्ट पढिन् । त्यसले उनमा अब केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझ बलियो बनायो ।
त्रिशलाका कभर सङले चर्चा बटुलिरहेकै थिए । त्यही बेला आर्बिटरीले उनीसँग गीतको भिडियो बनाइदिने प्रस्ताव राख्यो । उनी पनि सहमत भइन् । आर्बिटरीसँग मिलेर उनको चारवटा कभर सङको भिडियो बनाइन् । त्यसपछि त्रिशलाको गायन अझ हिट भयो । अब त्रिशलालाई आफ्नै गीत तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । त्रिशलालाई साथीहरूले पनि भन्न थाले, ‘कभर सङ गाउन पनि नछोड, अब आफ्नै युट्युब च्यानल खोल, धेरै ढिलो नगर ।’ उनलाई पनि लाग्यो, अब ढिलो गर्नु हुन्न, आफ्नै युट्युबमा बनाउनुपर्छ । उनी आफ्नै युट्युब च्यानल बनाएर भिडियो अपलोड गर्न थालिन् । अहिलेसम्म उनलाई कति कभर सङ गाए भन्ने यकिन छैन । ‘जे होस्, धेरै गीत गाइसकेकी हुँ,’ गुरुङ भन्छिन् । हिन्दी गीतको कभरमा नेपाली श्रोताको नकारात्मक कमेन्ट आउन थालेपछि उनी अहिले नेपाली गीतको मात्र कभर सङ गाउँछिन् ।
त्रिशलाको स्वभाव सामान्य छ । हल्काफुल्का पहिरनमा रमाउने त्रिशला फुर्सदमा गीत सुन्न रुचाउँछिन् । त्यसबाहेक बाँकी समय आफैं लिरिक्स लेख्छिन् । सबै किसिमका गीत उनको रोजाइमा पर्छन् । उनी लता मंगेसकरका पुराना हिन्दी गीत मन पराउँछिन् । अंग्रेजी गीत पनि सुन्छिन् । रक, पप सबै प्रकारका गीत सुन्ने त्रिशलालाई सबैभन्दा मन पर्ने गीत भने सेन्टिमेन्टल नै हुन् । उनलाई लतै लगाउने गीत भने ‘लग जा गले’ हो । ‘अहिले पनि यो गीत सुन्दा मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एभ्री टाइम यो गीत गाउँछु, मेरा आँखा आफैं रसाउँछन् ।’ नेपाली गीतमा उनलाई उदय, मलिना सोताङको ‘आधी बाटो’ तथा ‘तिमीबिना बाँच्न गाह्रो भयो’ अनि गुलाम अलिको ‘लोलाएको ती ठूला आँखा’ खुबै मन पर्छन् । उनी मलिना र उदय सोताङकी फ्यान हुन् । नारायण गोपाल, गुलाम अलि तथा रक गायक जीवन गुरुङ, अन्जु पन्त तथा मेलिना राई मनपर्ने गायक–गायिका हुन् ।
भारतका सतपालजी महाराजकी फलोअर्स त्रिशला भेजिटेरियन हुन् । उनलाई सबैभन्दा मन पर्ने खाना दाल, भात र तरकारी हो । गायनबाहेक फेसन र मेकअपमा पनि त्रिशलाको उत्तिकै रुचि छ । होस्टलमा बस्दा पनि उनी साथीहरूको मेकअप गर्ने र लुगाहरू छनौट गरिदिने काम गर्थिन् । उनलाई ट्राभलिङ पनि पर्छ । फरक संस्कृति र ठाउँको अवलोकन पनि उनको रुचिको विषय हो ।
स्वदेशमा धरान सबैभन्दा बढी मनपर्ने ठाउँ हो, विदेशमा अस्ट्रेलियाले उनको मन जितेको छ । ‘अस्ट्रेलियाका बीचहरू मलाई एकदमै मन परे,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल फर्किसकेपछि पनि फेरि जान मन लागिरह्यो ।’ क्याजुअल पोसाक मन पराउने गुरुङ टाइट पहिरन भने उति रुचाउँदिनन् । हाई हिल्स पनि उनको रोजाइमा पर्दैनन् । शोहरूमा लगाउनैपर्ने भएकाले उनी स–साना हिल्स लगाउँछिन् । त्रिशला आफूलाई जुन गीत मन पर्‍यो त्यही गीतको कभर सङ बनाउँछिन् ।
उनलाई मुभीमा पनि उति धेरै रुचि छैन् । पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खासै नपढ्ने त्रिशला म्यागजिनहरू भने हेरिरहेकी हुन्छिन् । उनका केही यस्ता फ्यान छन्, जो उनलाई नियमित पछ्याउँछन् । फेमिलीसँग रमाउन रुचाउने गुरुङ खासै दुःखी पनि हुन्नन् । नरम स्वभावकी त्रिशला छिनभरमै सबैको मन जित्न सक्छिन् ।
त्रिशलाले प्रारम्भिक शिक्षा धरानबाटै पूरा गरेकी हुन् । उनले पदम मेमोरियल स्कुल, धरानमा एक वर्ष अध्ययन गरिन् । त्यसपछि होली गार्डेन बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना भइन् । त्यहाँबाट उनले ४ कक्षा उत्तीर्ण गरिन् । ५ कक्षादेखि ८ कक्षासम्मको पढाइ दिल्ली पब्लिक स्कुल (डीपीएस) मा भयो । त्यसपछि गुरुङ परिवार काठमाडौं बसाइ सर्‍यो । उनी आलोक विद्याश्रम, बत्तीसपुतलीमा भर्ना भइन् । त्यहीँबाट उनले फस्ट डिभिजनमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् ।
त्रिशलाले गोल्डेनगेट कलेजबाट साइन्समा फस्ट डिभिजनमा प्लस टु सकिन् । पढाइमा पनि उत्तिकै अब्बल उनले कक्षा १२ को परीक्षामा फिजिक्समा दोस्रो उच्च अंक ल्याएकी थिइन् । भनिन्छ, पारिवारिक वातावरणले करिअर निर्माणमा सहयोग गर्छ । दाजु पुरण गुरुङ छाला रोग विशेषज्ञ भएकाले उनकै गाइडेन्समा त्रिशला पनि मेडिकल फिल्डमा पुगिन् । ॅराम्रो फ्युचर हुन्छ भन्ने पारिवारिक सल्लाहमै केयूको मेडिकल इन्ट्रान्स दिएँ,’ त्रिशलाले सुनाइन्, ॅनाम निस्कियो, नेपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न थालें ।’ अहिले उनी एमबीबीएस सकेर इन्टर्नको तयारी गरिरहेकी छिन् । भविष्यमा एमपीएच गर्ने आफ्नो योजना भएको उनले सुनाइन् ।